Tag: qaybinta war-saxaafadeed | Martech Zone
Tag: qaybinta war-saxaafadeed
Vuelio: Qalabkaaga Xiriirka Warbaahinta iyo Saameynta
Talaado, September 8, 2020 Talaado, September 8, 2020 Douglas Karr
Xidhiidhka dadweynaha ayaa si weyn isu beddelay qaraxa xarumaha warbaahinta xilligii dijital. Mar dambe kuma filna inaad dhowr meelood meel ka sameysato oo aad billowdo liistada billaha ah ee lagu xusay magacaaga. Maanta, xirfadlaha xiriirka bulshada ee casriga ahi waa inuu maareeyaa liistada sii kordheysa ee saameynta iyo daabacaadda, ka dibna caddeeyo saameynta ay ku leeyihiin sumad. Barnaamijka softiweerka ah ee loo yaqaan 'PR software' ayaa laga beddelay qaybinta war-saxaafadeed fudud oo loo gudbiyay maareynta xiriirka casriga ah
Adeegso Tilmaamahan iyo Qalabkan si aad uga guuleysato culeyskaaga Suuqgeynta
Arbacada, Maarso 21, 2018 Khamiista, Febraayo 25, 2021 Douglas Karr
Haddii aad rabto inaad si wax ku ool ah u maamusho culeyskaaga shaqo ee suuq-geynta, waa inaad qabataa shaqo fiican oo ah abaabulka maalintaada, dib u qiimeyn ku sameyso shabakaddaada, sameynta habab caafimaad leh, iyo inaad ka faa'iideysato barnaamijyada kaa caawin kara. Qaado Teknolojiyada kaa caawinaysa inaad diirada saarto maxaa yeelay waxaan ahay nin farsamo yaqaan ah, waxaan ku bilaabi doonaa taas. Ma hubo waxa aan sameyn lahaa la'aanteed Brightpod, nidaamka aan u adeegsado kala-hormarinta howlaha, isu soo uruurinta howlaha heerarka muhiimka ah, iyo in aan macaamiishayda la socodsiiyo horumarka.
Arbacada, Agoosto 16, 2017 Arbacada, Agoosto 16, 2017 Douglas Karr
Mid ka mid ah macaamiisheenna ayaa maanta naga yaabiyay, waxay noo soo sheegeen inay iska diiwaangeliyeen adeegga baahinta War-Saxaafadeed ee uu ku taliyay mid ka mid ah la-hawlgalayaashooda halkaas oo ay ugu qaybin karaan warsaxaafadeedkooda in ka badan 500 oo goobood oo kala duwan. Isla markiiba waan taahay… waa kan sababta: Adeegyada Qaybinta War-Saxaafadeedku ma kala sarreeyaan waxyaabaha aad adigu dhiirrigeliso haba yaraatee, markaa qofna haddii uu si firfircoon u dhagaysanayo war-saxaafadeed gaar ah, inta badan weligood laguma helin natiijooyinka raadinta. Qaybinta War-Saxaafadeed
Waa Waqtigii La Joojin Lahaa Qeybinta War Saxaafadeed otomaatig ah ee SEO
Khamiista, Noofembar 20, 2014 Khamiista, Noofembar 20, 2014 Douglas Karr
Mid ka mid ah adeegyada aan u fidinno macaamiisheenna ayaa kormeeraya tayada xiriirka dhabarka ee boggooda. Maaddaama Google ay si firfircoon u bartilmaameedsatay aagagga xiriirinta ka imanaya ilaha dhibaatada, waxaan aragnay dhowr macaamiil ah oo halgamaya - gaar ahaan kuwii kiraystay shirkado SEO ah waqtiyadii la soo dhaafay ee dib u xirmay. Ka dib markaan ka qaadnay dhammaan xiriiriyeyaasha la isweydiinayo, waxaan aragnay horumarin ku saabsan qiimeynta goobo badan. Waa geedi socod shaqo oo xiriir kasta laga hubiyo lana hubiyo